माधव नेपालको बैठकप्रति केपी ओलीको किन आपत्ति ? | Safal Khabar
माधव नेपालको बैठकप्रति केपी ओलीको किन आपत्ति ?
विहीबार, २१ साउन २०७८, ०८ : ४७
काठमाडौं । एमालेभित्रै अन्तरसंर्घष चर्काइरहेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आज आफु निटकका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बोलाएका छन् । परिवर्तित राजनीति र अब आफ्नो समुहले लिने रणनीतिका विषयमा छलफल गर्न नेपालले आज बिहान ११ बजेका लागि केन्द्रीय कमिटि बैठक बोलाएका हुन् ।
बैठक हिजो बुधबारका लागि नै बोलाईएको थियो । तर, कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरु काठमाडौं बाहिर रहेका कारण बैठकमा सहभागी हुन आउन समय लाग्ने देखेपछि बैठक आजका लागि सारिएको थियो । बैठक बिहान ११ वजे वुद्धनगरस्थित क्वालिटी ब्याङकेटमा बस्दैछ ।बैठकप्रति केपी ओलीले भने आपत्ति जनाएका छन् । उनले कार्यालय सचिव शेरवहादुर तामाडलाई वक्तब्य जारी गर्न लगाएरै नेपाल पक्षले बोलाएको आफु निकटको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा आपत्ति जनाउन लगाएका हुन् ।
नेपाल समुहले ओलीले अझै आफुलाई सञ्चाउन तयार नरहे देशब्यापी फेरि समानान्तर गतिविधि गर्ने तयारी गरिरहेका बेला ओलीले भने नेपाल समुहको बैठकप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । एमाले र माओवादीको एकता बदर गर्दै पूर्ववतः अवस्थामै पार्टीलाई फर्काइदिएपछि नेपाल समुहलाई पेल्ने रणनीति अनुसार ओलीले फागुन २८ मै एकपक्षिय आफु निटकको केन्द्रीय कमिटिको बैठक राखेर कतिपय निर्णय गराएका थिए । तर नेपालले पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएकोले माओवादी केन्द्रसँगको एकता अगाडीको अर्थात २०७५ जेठ २ मा पार्टी फर्काउनुपर्ने बताएका थिए ।
नेपालले त्यसका अतिरिक्त संविधान बचाउन र पूर्ण संसदका लागि एजेण्डामा ओलीले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने बताएका छन् । आफु लडेकोले त्यो एजेण्डाको रक्षाका लागि पनि नेपालले पूर्ण संसद संचालनको प्रतिबद्धता ओलीबाट खोजिरहेका छन् । तर ओली बालुवाटार छोडनु परेको पीडा भूल्न नसक्दा अझै आफु विनाको सरकार र कुर्सी भाँच्नका लागि अनेक दाउ खोजिरहेकै छन् । एजेण्डा जोगाउने या ओलीको ढाल बन्ने भन्ने नेपाल समुहमा गहिरो गरी बहस छ ।
तर ओलीले धेरै लामो समय सम्म त्यसलाई अटेर गर्दै गए । त्यसपछि नेपालले गत चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेका थिए । त्यसपछि देशब्यापी समानान्तर संगठन निर्माण गर्ने रणनीति लिएका थिए । पार्टीभित्र पार्टी बनाउने रणनीति अनुसार नेपाल समुहले पार्टीको तल्लो तहसम्मै र जनवर्गीय संगठनको पनि सोही अनुसारको समानान्तर संगठन निर्माण गरेका थिए ।
तर बीचमा कार्यदलका नाममा सहमति जुटाउने गरी १० वुँदे सहमति गरेर एकता मिलाउन प्रयास गरेपनि ओलीले भूलभूलैयामा नेपाल समुहका नेतालाई राखेर आफनो सामु आत्मसमर्पण गराउने र आफुले अह्राएखटाएको काम र जिम्मेवारीमा मात्र परिचालन गर्ने योजना बनाएका थिए । माधव नेपालको दोस्रो पुस्ताका नेताहरु नेपाल समुहका समग्र नेताहरुको ब्यवस्थापन, एमालेभित्र उनीहरुको सम्मानजनक अवस्था लगायतका विषयमा कुनै चासो नै नदिई मिल्न जाने छाँटकाँट देखाएपछि तेस्रो पुस्ता भने आक्रामक छ ।
तेस्रो पुस्ताका नेताहरुले भने बरु अलग पार्टी निर्माण गरेर जानुपर्ने तर ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्नु नहुने अडानमा छ । नेपाल स्यवंले भने आफ्नो समुहको सुरक्षाका लागि सम्मानजनक एकताको कुरा उठाईरहेका छन् । त्यसका लागि उनले नेतृत्व सम्वन्धी तीन वटा विकल्प पनि अगाडी सारेका छन् । पहिलो पार्टीभित्र दुई अध्यक्ष र निर्णय प्रक्रियामा दुवै अध्यक्षको अनिवार्य हस्ताक्षर । त्यसो गर्न सकेमा ओलीले एकलौटी र मनोमानी निर्णय गर्न नसक्ने, आफनो समुहका नेताहरुको जिम्मेवारी र टिकट वितरणमा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्न सकिने र सबैको सुरक्षा पार्टीभित्रै गर्न सकिने सोचेको छ ।
दोस्रो विकल्पमा अध्यक्ष मण्डल बनाउने र त्यसका लागि ओली, नेपाल सहित वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल रहेको अध्यक्ष मण्डल बनाउने । तेस्रो विकल्पमा रुपमा ओली र नेपालले नेतृत्व छोडेर अर्को पुस्ताका नेतामा नेतृत्व जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने । नेपालले सारेको नेतृत्व सम्वन्धी यो तीन प्रस्तावमा ओली अझै सकारात्मक देखिएका छैनन् । ओलीले नेपाललार्इ दोस्रो अध्यक्ष बनाउन सकिने सम्मको प्रस्ताव त गरेका छन, तर निर्णय प्रक्रियामा अनिवार्य हस्ताक्षरका विषयमा अझै सकारात्मक छैनन् । जसकाकारण एमालेभित्रको विवाद मिल्ने दिशामा छैन् ।
नेपालले त्यसका अतिरिक्त संविधान बचाउन र पूर्ण संसदका लागि एजेण्डामा ओलीले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने बताएका छन् । आफु लडेकोले त्यो एजेण्डाको रक्षाका लागि पनि नेपालले पूर्ण संसद संचालनको प्रतिबद्धता ओलीबाट खोजिरहेका छन् । तर ओली बालुवाटार छोडनु परेको पीडा भूल्न नसक्दा अझै आफु विनाको सरकार र कुर्सी भाँच्नका लागि अनेक दाउ खोजिरहेकै छन् । एजेण्डा जोगाउने या ओलीको ढाल बन्ने भन्ने नेपाल समुहमा गहिरो गरी बहस छ । त्यही भएर पनि नेपालले यस विषयमा छलफलका लागि आफु निकटका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बोलाएका हुन् ।